Ukuphupha ngeCellulite Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngaphezulu kwesinye kwabasetyhini abathathu abanaso - iidenti ezantsi ezantsi kunye namathanga ezenza ukuba ufune ukuvala amehlo xa ujonge esipilini. Iseliulite lutshintsho lomgaqo-siseko kwithishu enamafutha engaphantsi. Ngenxa yokwakheka kwethishyu yamadoda, amadoda kunqabile ukuba achaphazeleke yi-cellulite. Izicubu ezinxibelelana nabasetyhini ziguquguquka ngakumbi, ezinengqiqo kwimeko yokukhulelwa.
Izicubu ezinamanqatha phantsi kolusu zomelezwa yimicu ye-collagen, ethi ilungiswe emadodeni njengenethiwekhi. Kwabasetyhini, nangona kunjalo, le micu ilele ecaleni komnye nomnye, eyenza ulusu lube lula kakhulu kwaye luzive luthambe ngakumbi. Kodwa ukuba iiseli ezinamanqatha zikhula phantsi kolusu, zinokusebenza ngendlela ye-collagen ngokulula ngakumbi emfazini kunakwindoda. Iziphumo: Kukho imilenze engabonakaliyo apho inani elikhulu labasetyhini lizama ukulwa nayo ngazo zonke iindlela ezinokubakho nezingenakwenzeka. Abanye abantu basetyhini bayazamkela ngokwabo nemizimba yabo njengoko benjalo.
I-Cellulite ayikho imeko echaphazela kuphela abantu abadala. Amantombazana amancinci nawo anokufumana ubunzima kuyo, nto leyo edla ngokubangelwa zizinto ezizuzwe njengelifa. Nangona kunjalo, ngaphezulu kwako konke ziihormone ezibangela ukuba abasetyhini bahlupheke koko kubizwa ngokuba sisikhumba se-orenji, kuba bayaqinisekisa ukuba iidipozithi ezinamafutha ziyadalwa emzimbeni, othi wona uzinze ezinqeni nasemathangeni ukhuthaze ukukhula kwecellulite apho . Kodwa kuthetha ntoni xa umntu ephupha nge-cellulite? Utolikwa njani lo mfuziselo waphupha?
1 Uphawu lwephupha «Cellulite» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Cellulite» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Cellulite» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Cellulite» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba iphupha eli linengxaki ye-cellulite ephupheni ngokwalo, oku kunokutolikwa ngeendlela ezahlukeneyo. Mhlawumbi uvakalelo lokwenyani luboniswa apha ukuba umntu uchaphazeleke ngokwenene yi-cellulite. Kumabhinqa amaninzi, imisipha engabukekiyo yingxaki yokwenyani, kodwa bahlala benqabile ukuthetha ngayo. Uninzi lwabantu lusacinga ukuba i-cellulite ichaphazela kuphela abantu abatyebileyo nabatyebe kakhulu.
Nangona kunjalo, oku akunjalo konke konke, kodwa lo mntu kuthethwa ngaye uhlala engonwabanga ngezakhe iinzipho kwaye uzama ukuzifihla eluntwini. Ke ngoko, iphupha elinolu phawu lwephupha linokuba yinkcazo ecacileyo yale ngxaki. Umntu ophuphayo woyika (esazi okanye engazi) eyakhe. nomtsalane, ukuzithemba kwabo kuyehla.
Emaphupheni sihlala silungisa izinto ezihlala kuthi ebomini bokuvuka. Nokuba ucinga ukuba ucinga ngaphezulu kwezinto ezithile, emaphupheni uhlala ubonisa ukuba isifundo sikuchukumisa kakhulu kunokuba ucinga.
Uphawu lwephupha «Cellulite» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba ujonga umfanekiso wephupha "i-cellulite" ngokwembono yengqondo, oku kutyhila into "enamathele" phantsi kolusu. Umzekelo, ithi "phuma kulusu lwakho" iyaziwa.
Kanye njengokuba unokuchaza izinto ngokudubula kube kanye kwaye uvumele yonke into ebengezelayo ngaphantsi komphezulu uphumele ngaphandle, kuhlala kuninzi okushiyekileyo emfihlakalweni. Ubamba umnqweno wokuvumela izinto ziphume kuba unoloyiko lokuba oko kuya kukubeka kwindawo engeyiyo okanye awusathandi.
Uphawu lwephupha "i-cellulite" lubiza iphupha kula mandla akulo. Ingcaciso uboleke kwaye uphile oko uziva kuwe ngokweemfuno ezifihliweyo.
Uphawu lwephupha «Cellulite» - ukutolika kokomoya
Kwakhona kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha «cellulite» lubonisa ukufihla nokufihlakeleyo amandla acinezelweyoekufuneka ibekwe intshukumo ukuze, njengamandla eKundalini, ikwazi ukuphakama iguqule emzimbeni.
Imfundiso yaseKundalini ivela eIndiya, ngendlela, kwaye ithi umntu onokuthi asebenzise la mandla kuye angawavula amandla akhe phezulu njengenyoka emqolo. Le nkqubo ikhokelela kumava okukhanya kokomoya.